Hadsel: Jaaliyada soomaaliyeed ee Hadsel oo garab istaagey Bushro Jaamac. - NorSom News
Hadsel: Jaaliyada soomaaliyeed ee Hadsel oo garab istaagey Bushro Jaamac.
Jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Hadsel iyo agagaarkeeda ayaa taageero weyn u muujiyey Bushro Jamac oo ah hooyo soomaaliyeed oo sharciga dal ku jooga ay dowlada kala noqotey, laguna amrey iney wadanka isaga baxaan, iyada oo qoyskeeda.
Halkan ka akhri sheekada xanuunka badan ee Bushro iyo qoyskeeda.
Hana Mohamed Ismael oo kamid ah dadka soomaaliyeed degan magaaladaas ayaa wargeyska lokalka ah ee VOL.no u sheegtay, in soomaalida degan Hadsel ay aad uga xunyihiin dhibta soo gaartey Bushro, ayna sameynayaan mudaaharaad ay arinkaas uga soo horjeedaan maalinta barito ah ee sabtida. Hana ayaa sidoo kale ka codsatey dadka deegaanka iney mudaaharaadkaas si fiican uga soo qeybqaataan
Maanta oo jimce ah waxaa sidoo kale loo balansanaa banaanbax ka bilaabanayaa iskuulka ay Bushro dhigato, kaas oo lagu muujinayo sida looga xunyahay go-aanka dowlada ee ku saabsan qoyskan soomaaliyeed.
Waxaa muuqato in Bushro Jaamac iyo qoyskeeduba ay hada taageero weyn ka heleen dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Hadsel. Iyada ay dhamaantood ay isla qirayaan in Bushro ay kamid tahay dadka deegaanka, dhibta soo gaartana ay tahay dhib iyaga soo gaartey.
Previous article(Aragti) Abdulkadir Osman: Soomaalida waxaa loo diidanyahay degenaan iyo xasilooni ay ku fakaraa
Next articleElvis Chi Nwoso: Maanta waa soomaalida, barina mana naqaan guruubka ku xigi doono.